2GB PST Njikwa Nsogbu. Oversized PST Njikwa Nsogbu.
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Repair Oversized PST faịlụ nsogbu (PST faịlụ nha ruru ma ọ bụ karịa njedebe 2GB).
Zuru ezu Ozi banyere Oversized PST File Nsogbu
Gịnị bụ Oversized PST File Nsogbu?
Microsoft Outlook 2002 na nsụgharị ndị mbụ na-amachi nha nke faịlụ Personal Folders (PST) na 2GB. Mgbe ọ bụla faịlụ PST ruru ma ọ bụ karịa na njedebe ahụ, ị ​​gaghị enwe ike imeghe ma ọ bụ bufee ya ọzọ, ma ọ bụ ịnweghị ike ịgbakwunye data ọhụrụ ọ bụla na ya. A na-akpọ nke a nnukwu nsogbu PST faịlụ.
Outlook enweghị ụzọ e wuru iji zọpụta faịlụ PST buru ibu nke na-enweghị ike ịnweta. Agbanyeghị, Microsoft na-enye pst2gb ngwa ngwa dị na mpụga, nke nwere ike weghachite faịlụ na ọnọdụ eji ya. Ma maka ụfọdụ, ngwá ọrụ a ga-ada na iweghachi oversize faịlụ. Na ọbụna ma ọ bụrụ na weghachi usoro ihe ịga nke ọma, ụfọdụ data ga-truncated na lost na-adịgide adịgide
Microsoft weputara ọtụtụ ngwugwu ọrụ nke mere na mgbe faịlụ PST na-abịaru nso njedebe 2GB, Outlook enweghị ike itinye data ọhụrụ ọ bụla na ya. Usoro a, ruo n'ókè ụfọdụ, nwere ike igbochi ka faịlụ PST buru ibu. Mana ozugbo njedebe ruru, ị gaghị enwe ike ịrụ ọrụ ọ bụla, dị ka izipu / nata ozi ịntanetị, detuo ederede, debe nhọpụta, wdg, belụsọ na iwepụ ọtụtụ data na faịlụ PST na kọmpat emesia iji belata nha ya. Nke a anaghị adị mfe mgbe data Outlook na-ebuwanye ibu.
Kemgbe Microsoft Outlook 2003, a na-eji usoro faịlụ PST ọhụrụ, nke na-akwado Unicode ma enweghị oke nke 2GB ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eji Microsoft Outlook 2003 ma ọ bụ 2007, wee mepụta PST faịlụ na usoro Unicode ọhụrụ, ị gaghị echegbu onwe gị maka nsogbu ahụ karịa.
1. Mgbe ị na-agbalị ibu ma ọ bụ nweta oversized Outlook PST faịlụ, ị ga-ahụ njehie ozi, dị ka:
Achọpụtala njehie na faịlụ xxxx.pst. Kwụsị ngwa niile ejiri rụọ ọrụ, ma jiri Ngwaọrụ Mmezi Igbe.
ebe 'xxxx.pst' bu aha nke Outlook PST faịlụ ka eburu ma obu banye.
2. Mgbe ị gbalịrị ịgbakwunye ozi ọhụrụ ma ọ bụ ihe ọhụrụ na faịlụ PST, na n'oge usoro ịgbakwunye, faịlụ PST ahụ ruru ma ọ bụ gafee 2GB, ị ga-ahụ Outlook na-ajụ ịnabata data ọhụrụ ọ bụla na-enweghị mkpesa ọ bụla, ma ọ bụ na ị ga-ahụ njehie ozi, dị ka:
Enweghị ike itinye faịlụ ahụ na folda ahụ. Omume ahụ enweghị ike mechaa.
Task 'Microsoft Exchange Server -'nata' njehie akuko (0x8004060C): 'Error Unknown 0x8004060C'
Faịlụ xxxx.pst eruola oke nha ya. Iji belata ọnụ ọgụgụ data dị na faịlụ a, họrọ ụfọdụ ihe ndị na-adịghịzi mkpa gị, wee mezie (nnofe + del) hichapụ ha.
Task 'Microsoft Exchange Server' kọrọ njehie (0x00040820): 'Njehie na mmekọrịta mmekọrịta. Na most ikpe, ozi ndị ọzọ dị na mmekọrịta mmekọrịta na nchekwa ihe ndị ehichapụ. '
Enweghị ike i copyomi ihe ahụ.
Dị ka e kwuru n'elu, Microsoft enweghị ụzọ nke nwere ike idozi nsogbu faili PST buru ibu afọ ojuju. Ihe kachasị mma bụ ngwaahịa anyị DataNumen Outlook Repair. Ọ nwere ike naputa oversized PST faịlụ enweghị ihe ọ bụla data losses. Iji mee nke a, e nwere ụzọ abụọ ọzọ:
Ọ bụrụ na ị nwere Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu arụnyere na kọmputa gị, ị nwere ike gbanwee faịlụ PST buru ibu gaa na usoro unicode Outlook 2003 ọhụrụ, nke na-enweghị njedebe 2GB. Nke a bụ usoro kachasị mma.
Ọ bụrụ na ịnweghị Outlook 2003 ma ọ bụ ụdị dị elu karịa, ị nwere ike kewaa oversized PST faịlụ n'ime ọtụtụ obere faịlụ. Faịlụ ọ bụla nwere akụkụ nke data na faịlụ PST mbụ, mana ọ bụ ihe na-erughị 2GB na onwe ya na ndị ọzọ ka ị nwee ike ịnweta ya iche na Outlook 2002 ma ọ bụ obere nsụgharị na-enweghị nsogbu ọ bụla. Usoro a adighi adighi nma dika ichoro ijikwa otutu faili PST mgbe emechara nkewa.
Wzọ 8 iji gbochie nrụrụ aka faịlụ PST
Microsoft Knowledgebase Nkeji edemede 329910: “Outlook.pst enweghị ike inweta - 0x80040116” njehie ozi mgbe ị start Outlook 2000 ma ọ bụ mepee folda folda nkeonwe.
Microsoft Knowledgebase Nkeji edemede 296088: Oversized PST na OST akụrụngwa.
Microsoft Knowledgebase Nkeji edemede 303652: OL2001: Faịlụ nchekwa nchekwa nke onwe agaghị akarị 2 Gigabytes na nha.
Microsoft Knowledgebase Nkeji edemede 304863: Idozi: Nzipu e-mail na-akwụsị mgbe folda nkeonwe ma ọ bụ folda na-anọghị n'ịntanetị juputara.
Microsoft Knowledgebase Article 288283: Faịlụ na-anọghị n'ịntanetị na faịlụ folda onwe onye kwụsịrị ịnabata data na Outlook 2002.
DataNumen Database Recovery 2.7 weputara na Disemba 25th, 2020
DataNumen Archive Repair 3.3 weputara na Disemba 25th, 2020